Maitiro ekumisikidza ekuchengetedza optimization muApple Music | IPhone nhau
Kune 16GB zvishandiso, nzvimbo ihondo yakakosha, chimwe chinhu chinenge chichiwedzera kuderedzwa mukukosha, sezvo Apple yabvisa zvese 16GB zvigadzirwa zvekuchengetedza kubva kuApple Chitoro, zvakanyanyisa iyo iPhone SE, nhare mbozha yeCheap Apple. Neizvi, Tichakudzidzisa maitiro ekuchengetedza nzvimbo kana uri mushandisi wenguva dzose kana kunyoreswa kuApple Music, Apple's mimhanzi yekushambadzira sisitimu ine kusangana kwakanakisa, uye zvine hanya kuti isu tinochengetedza yakanyanya huwandu hwenzvimbo inowanikwa mudura redu. Tarisa uone aya matanho akapusa kana iwe uchida kuchengetedza nzvimbo pane yako iPhone ndangariro.
Kutenda kune ino system, iwe uchaona kubva pa2GB yekuchengetedza yenziyo dzese dzakadzorwa. Kana iwe ukasarudza kurodha pasi zvimwe, iyo sisitimu inongodzima pikicha yekare yausingaberekese nguva dzose. Ngatione kuti tingaite sei basa iri. Tinoda kusimbisa kuti iyi sarudzo inongowanikwa muIOS 10.
Chekutanga pane zvese, isu tichaenda kune iyo Sisitimu yekushandisa ye iPhone yedu, hongu. Ipapo, isu tichaenda kune iyo «Music» application, kana isu tinoshandisa marongero ekutsvaga injini, iwe unotoziva kare kuti iri kumusoro, chimwe chinhu senge Kutaridzika kwemasetwork. Pane imwe nguva mukati meMimhanzi uye kana isu takabhadhara kunyorera kweApple Music, sarudzo "optimize kuchengetedza" ichaonekwa. Isu tinongodzvanya, uye sarudza iyo yekuchengetera yatinoda, 2GB, 4GB, 8GB kana 16GB yenzvimbo yepamusoro. Uye zvakare, padivi payo paizoonekwa huwandu hwenziyo dzatinogona kusevha nekuchengeta ikoko. Uye iyi ndiyo nzira iri nyore yekuchengetedza nzvimbo nemumhanzi. Zvichakadaro, isu tichakamirira Apple kuti isarudze kutibvumidza kudzima data rezvishandiso, sezvo vamwe vakaita saFacebook chitoro chinenge 1GB yedata, nepo application ichinyanya kungotora mazana mashoma maMB. Tinovimba rairo iyi yakubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekumisikidza ekuchengetedza optimization muApple Music muIOS 10
Jose Mercado akadaro
Sarudzo, chaizvo, inoti "nzvimbo shoma", kwete yakanyanya, saka ndinotya kuti mashandiro esarudzo iyi haanyatsoita sezvakaratidzwa muchinyorwa.
Inotaridzika kunge ichamirira kusvika pasisina chero nzvimbo pachigadzirwa kuti itange kudzima mimhanzi (kana cached Apple Music mafaera) kusvika pamuganhu watakamuisira iwo.
Pindura kuna Jose Mercado
Chimwe chikamu, chakanangana necache uye data dambudziko rezvishandiso senge instagram, facebook uye snapchat inosvika kumusoro kweinopfuura 1gb. Ivo vanogona kudzima maapplication uye nekuzoaisa zvakare, kuitira kuti vadzose ndangariro.